Socdaal oo aad jeceshahay inaad neefsato hawo nadiif ah? Meesha aan la aadin
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Baxrayn » Socdaal oo aad jeceshahay inaad neefsato hawo nadiif ah? Meesha aan la aadin
Wararka Baxrayn • Bangladesh Wararka Wararka • Bhutan Breaking News • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Cameroon • Wararka Shiinaha • Wararka Masar • Wararka Hindiya • Wararka Ciraaq • Wararka Kiribati • Wararka Kuweyt Kuweyt • Wararka Liibiya • Mauritania Breaking News • Wararka Burburinta Myanmar • Wararka Nepal • Wararka Cusub ee New Zealand • Wararka Jabhada Niger • Wararka Cumaan • Pakistan War Deg Deg Ah • Wararka Qadar • Waajib ah • Sacuudi Carabiya Warka • Wararka Solomon Islands • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Daalacanayo Hadda • Uganda War Deg Deg Ah • Wararka UK • Wararka Mareykanka
Gobolka Khaliijku wuxuu noqon karaa hogaamiyaha safarka raaxada iyo dalxiiska, laakiin wuxuu leeyahay tayada hawada ugu xun adduunka. Iyada oo qayb ka ah ololaha Maalinta Dunida ee magaalooyinka cagaaran, Eco2Greetings waxay dooneysaa in adduunku qaato habab sida ku biirista kacaanka qorraxda, doorbididda dhismayaasha cagaaran iyadoo xoogga la saarayo tamarta la cusbooneysiin karo, iyo go'aan ka gaarista noocyada kale ee gaadiidka sida baaskiil ama bas waxay kaa caawineysaa yareynta qiiqa wasakheysan.
Magaalooyinka sunta leh ayaa inta badan ah mushkilad uu dad sameeyay. Isha kaliya ee ugu weyn ee wasaqowga hawada waa gubida shidaalka shidaalka sida dhuxusha iyo shidaalka. Shidaalka foosha ayaa loo isticmaalaa kuleylinta, si loogu shaqeeyo gawaarida gaadiidka, abuurista korantada, iyo wax soo saarka iyo hababka kale ee warshadaha. Gubeynta shidaalkan waxay sababtaa qiiqa, roobabka aashitada iyo qiiqa gaaska lagu sii daayo.
Wadamada Bariga Dhexe ee saliida qaniga ku ah waxay ku badan yihiin tobanka boos ee ugu sareeya liiska magaalooyinka ugu wasakheysan. Magaalooyinka noocan ahi waxay ku yaalliin:
Sacuudi Carabiya, heerka walxaha walxaha ee 108.
Qatar, heerka walxaha walxaha ee 103.
Masar, heerka walxaha walxaha ee 93.
Bangladesh, heerka walxaha walxaha ee 84.
Kuwait, heerka walxaha walxaha ee 75.
Cameroon, heerka walxaha walxaha ee 65.
Heerka walxaha Mauritania ee 65.
Nepal, heerka walxaha walxaha 64.
Imaaraadka Carabta, heerka walxaha walxaha 64.
Hindiya, heerka walxaha walxaha ee 62.
Liibiya, heerka walxaha walxaha ee 61.
Baxrayn, heerka walxaha walxaha ee 60.
Pakistan, heerka walxaha walxaha ee 60.
Niger, heerka walxaha walxaha ee 59.
Ugaandha, heerka walxaha walxaha ee 57.
Shiinaha, heerka walxaha walxaha ee 54.
Myanmar, heerka walxaha walxaha 51.
Ciraaq, heerka walxaha heerka 50.
Bhutan, heerka walxaha walxaha ee 48.
Cumaan, heerka walxaha heerka 48.
Boqortooyada Midowday ee Boqortooyada Midowday ayaa liiskan kujirta 159-aad iyadoo leh heer walxood ah 12. USA waxaa lasiiyay kaalinta 173-aad, iyadoo heer walxo aad u hooseeya oo heer sare ah 8.
The map falgal sidoo kale waxay muujineysaa in wadamada sida Shiinaha, oo caan ku ah la'aanta hawo nadiif ah magaalooyinkooda gudaheeda, ay leeyihiin hawo wasakhaysan oo ah HALF qadarka Sacuudiga. Shiinaha wuxuu dhaliyay heer 54 marka la barbar dhigo dhibcaha walxaha argagaxa leh ee Saudi Arabia ee 108. Sacuudi Carabiya ayaa ah dambiilaha ugu sarreeya saamiyada magaalooyinka ugu wasakheysan.
Suurtagalnimada in la horumariyo cudurada wadnaha, kansarka iyo istaroogga ayaa ku sii kordhay meelaha wasakheysan iyo daraasadaha ayaa cadeynaya in heerka dhimashada caruurta ay aad uga sareyso wadamada leh wasakheynta hawada. Sida laga soo xigtay Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO), wasakheynta hawadu waxay hadda khatar weyn ku tahay caafimaadka marka loo eego Ebola ama HIV oo 80% dhammaan magaalooyinka waxay leeyihiin heerar wasakheynta hawada ee ka sarreysa koofiyadda waxaa loo arkaa inay caafimaad qabaan.
Dhammaantood ma ahan halaag iyo calool xumo, qaar ka mid ah hawada ugu nadiifsan adduunka waxaa iska leh New Zealand, Solomon Islands, Kiribati iyo Brunei Darussalam, oo dhammaantood ku faanaa heer cajaa'ib leh oo ku saabsan sheyga 5.
Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan magaalooyinka ugu sunta badan adduunka, waad booqan kartaa: www.eco2greetings.com.